Joomla CMS- စာမျက်နှာ2- MYSTERY ZILLION
Joomla! package ကြီးထဲမှာ Installation ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုပါတယ်အစ်ကို
အဲဒီ folder ကို အားရပါးရသာ delete လုပ်ပစ်လိုက်။
အားရပါးရ delete လုပ်လိုက်ပြီ ... ရပြီ ... ကျေးဇူးပါဗျာ ... ရှဲ့ရှဲ့ ။ :6:
တကယ်ကို တယောက်ယောက်က ပြန်ဖြေပေးတဲ့ အထိစောင့်တယ်ဗျာ :P
အဲဒီ error message မှာလေ installation folder ကိုဖျက်ပေးပါလို့ သတိပေးစာသားပါတယ်ဗျ .. အဲဒါလေးတွေ့ပါစေတော့လို့ တမင်ပြစ်ထားတာဗျို့ ..
စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဗျာ :67: စာများများဖတ်ပေးကြပါဗျို့:2:
မသိလို့မေးပါတယ်ဆိုမှ ပြစ်ထားတယ် .... လူဆိုး
ဒီလိုကိတ်စမျိုးတွေလဲ ရှိတယ်လား ... ကျနော်က installation directory မှာ error ရှိတယ်လို့ထင်နေတာဗျ ... အဲ့ဒါကြောင့် ပြန်ဖျက်လိုက် သွင်းလိုက်လုပ်နေတာ ... အဲ့ဒီလို folder ကြီးဖျက်ရမယ်လို့ ထင်မှမထင်ထားတာ .... အခုတော့အဆင်ပြေသွားပြီ ... ကျေးဇူးပါဗျို့ ..
ps ... MrDBA ကို ကျေးဇူးမတင်ပါ ... စိတ်ဆိုးတယ် ... သွား ... လူဆိုး
အေးလေ အဲဒါကြောင့်ပြောပါတယ်ရယ်ကော error ပေါ်တိုင်းမကြောက်ပါနဲ့ error မှာ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ နဲနဲတော့ ပြောပြထားတတ်ကြပါတယ် .. စာမဖတ်ဘဲ ထင်ရာလုပ်နေလို့မှမရတာကိုး .. ပြီး စာဖတ်လိုက်ရင် ဒီမှာ သူများဖြေတာကိုလာထိုင်စောင့်နေစရာမှမလိုတာ ကိုယ့်လက်ထဲမှာဘဲ အဖြေကရှိနေတာကို ..
ကို DBA ရဲ့ စကားကို ထောက်ခံပါတယ်... အဲဒီ install folder ဖျက်ရမယ့် ပြသနာက မြန်မာနိုင်ငံက အခုမှ Joomla စသုံးကာစ လူတိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့ ပြသနာပဲ... error ပေါ်တာကို သေသေချာချာ ဖတ်ကြဖို့လိုပါတယ်..
နောက်တစ်ခုခုသိချင်ရင် google လိုက်
ကျွန်တော်စသုံးတုန်းကလည်း google မှာ
"how to remove installation directory" ဆိုပြီးရှာလိုက်တာပဲ။
Joomla မှာပေါ်တဲ့ message ဆိုတော့ how to remove installation directory in Joomla လို့ထည့်ရှာပါလား... ကျွန်တော်ကတော့ ဘာပဲ ရှာရှာ သူနဲ့ သက်ဆိုင်တာလည်း အမြဲထည့်တာပဲ... တွေ့တာမတွေ့တာ နောက်မှပေါ့... :P
Google ဆိုလို့ Google နဲ့ Yahoo ပေါင်းပြီး result တွေထုတ်ပေးနို်င်တဲ့ site လေးတစ်ခုသိထားပါတယ်။သိပြီးရင်လည်းသိပြီးကြမှာပါ။
Google မှာပဲပါပြီး Yahoo မှာမပါတဲ့ဟာတွေကို Google Orphan လို့ပြပြီး
Yahoo မှာပဲပါပြီး Google မှာမပါတဲ့ဟာတွေကို Yahoo Orphan လို့ပြပေးပါတယ်။
သိဘူးလေဗျာ ... အဓိပါယ်ကောက်လွဲသွားတာကိုး ....eမကောင်းပါဘူးဆိုမှ ....
ဘယ်လိုပဲဘာသာပြန်ပြန် ... installation directory ကို security အရဖျက်လိုက်ပြီ။ သုံးလို့မရတော့ဘူးလို့ပဲ ဘာသာပြန်မိနေတာကိုး ... သေချာတော့ မဖတ်မိလိုက်ဘူး ... သုံးချင်အားကြီးပြီး စိတ်လောနေတာနဲ့ပဲ ... ခုတော့သိပြီ ...
နောက်လဲမမေးတော့ပါဘူး ... google ပဲလိုက်တော့မယ် ... အရင်တုန်းကတော့ရှာတယ်ဗျ ... ခုတော့အပျင်းကြီးနေတာ ... MZ ကိုအားကိုးတာကိုး ... အားကိုးလို့အိုးကားသွားတယ်
ကျေးဇူးပါဗျာ ... ဖြေပေးကြတာ :6:
ဒါပဲဗျာ ... ကျနော်ပေါတောတောတွေ လျှောက်ပြောနေတာနဲ့ပဲ Pro တွေရဲ့ ဆွေးနွေးခန်းကနေ အလာပသလာပပြောလိုဖြစ်သွားတော့မယ် ... အက်ဒမင်ကြီးစိတ်ဆိုးနေအုံးမယ် တာ့တာ့
အဲလိုလဲ မဟုတ်ပါဘူး တချို့ လွယ်တာလေးတွေကိုတော့ အဲလို သတိမထားမိလို့ အဖြေစောင့်နေရတာကို ပြောပြတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ့်လူတွေ သိပ်အလွယ်လိုက်သွားမှာ စိုးရိမ်လို့ပါ .. ကျွန်တော်တိို့တောင် မသိနိုင်လွန်းရင် ဒီမှာ ဘဲ မေးခွန်းထုပ်ပြီး Brain Storm လုပ်ရသေးတာဘဲ ..
စိတ်ချပါဗျာ အလွယ်မလိုက်ပါဘူး .... အခုက web site တစ်ခုဆောက်နေတာဗျ .... ဒီ fourm ထဲမှာမှ joomla ဆိုတာကိုကြားဖူးပြီး လုပ်ကြည့်မလို့ .... ကျနော်က Dynamic website မဆောက်တတ်တော့ .... joomla က Ready Made တွေနဲ့ ကိုယ့် website ထဲမှာ တွဲပြီးသုံးကြည့်ချင်လို့ .... .... အခုတော့ ရိုးရိုးပဲဆောက်ထားသေးတယ် ... နောက်မှဖြည်းဖြည်းချင်း လိုက်ထည့်သွားတော့မယ် .... joomla လဲလေ့လာနေဆဲပါ .... အခုတစ်လော အလုပ်နည်းနည်း ရှုပ်နေတာနဲ့ .... MZ မှာတင်မလို့ Tutorial လေးတွေလုပ်နေတယ် .... Design ပိုင်းပေါ့ .... ကြာတော့ကြာအုံးမယ် .... ကျနော့်ရဲ့ပျင်းတဲ့စိတ်ကို ထောက်ပြတာ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ ... မဟုတ်ရင် နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမှာလာလာမေးမိနေတော့မှာ ... အဲ ... အကြီးကြီးကျရင်မေးမယ်နော် .... ဖြေပေးနော် .... ပြစ်မထားရဘူး ...
:1: စိတ်ချပါဗျာ အလွယ်မလိုက်ပါဘူး .... အခုက web site တစ်ခုဆောက်နေတာဗျ .... ဒီ fourm ထဲမှာမှ joomla ဆိုတာကိုကြားဖူးပြီး လုပ်ကြည့်မလို့ .... ကျနော်က Dynamic website မဆောက်တတ်တော့ .... joomla က Ready Made တွေနဲ့ ကိုယ့် website ထဲမှာ တွဲပြီးသုံးကြည့်ချင်လို့ .... :1: .... အခုတော့ ရိုးရိုးပဲဆောက်ထားသေးတယ် ... နောက်မှဖြည်းဖြည်းချင်း လိုက်ထည့်သွားတော့မယ် .... joomla လဲလေ့လာနေဆဲပါ .... အခုတစ်လော အလုပ်နည်းနည်း ရှုပ်နေတာနဲ့ .... MZ မှာတင်မလို့ Tutorial လေးတွေလုပ်နေတယ် .... Design ပိုင်းပေါ့ .... ကြာတော့ကြာအုံးမယ် .... ကျနော့်ရဲ့ပျင်းတဲ့စိတ်ကို ထောက်ပြတာ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ ... မဟုတ်ရင် နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမှာလာလာမေးမိနေတော့မှာ ... အဲ ... အကြီးကြီးကျရင်မေးမယ်နော် .... ဖြေပေးနော် .... ပြစ်မထားရဘူး ... :1:
Joomla 1 နဲ့ 1.5 ရဲ့ကွာခြားချက်ကိုသိချင်ပါတယ် .... joomla 1 က module တွေ ၊ Templates တွေကဘာလို့ joomla 1.5 မှာသုံးလို့မရတာလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ် .... ဘာနည်းပညာတွေ ကွာသွားလို့လဲ ....
joomla 1 နဲ့ 1.5 မှာဘာဟာပိုကောင်းသလဲ .... ဘယ်ဟာကပိုပြီးလုပ်လို့ရလဲ ..... ကျနော်ရှာကြည့်သလောက်တော့ joomla 1.5 က Component , modules တွေတော်တော်များများက ပိုက်ပိုက်နဲ့မှ ရသလိုပဲ ....
joomla professional template တွေကို club member မ၀င်ပဲ .... ပိုက်ပိုက်မပေးပဲ သုံးရင်ဘာဖြစ်တတ်သလဲ သိချင်လို့ပါ .... ဖြေပေးကြပါနော် .... ဒီတစ်ခါလဲ ပြစ်မထားကြပါနဲ့အုံး
ဒီလင့်လေးမှာ အစ်ကို သိချင်တာ ရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ... ကျွန်တော်လဲ မြန်မာလို
မရှင်းပြတတ်လို့ လင့်ပဲပေးလိုက်တာ ...
ကျွန်တော် ဒီ Forum လေးကိုဝင်ဖတ်ရင်း ကျွန်တော်သိထားတဲ့ Joomla Knowledge တွေကို share ပေးခြင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် Joomla Developer ဖြစ်တာ2years ရှိပါပြီ ဒါကြောင့် အများကြီး မဟုတ် ရင်တောင် ထိုက်သင့် သလောက်တော့ သိပါတယ်။
ကျွန်တော် components, Modules တွေတော်တော် များကို Customer Requirement အတိုင်း customize လုပ်နေတာပါ။ Joomla ရဲ့ PHP Coding Flow ကိုပါသိပါတယ်။ ကျွန်တော် သုံးနေတာက Joomla! 1.0.xx Stable version ပါ။ ကျွန်တော်စ လုပ်တုန်းက Joomla 1.5 မ ထွက် သေးပါဘူး။ Project တွေကလည်း Joomla! 1.0.xx ကိုပဲ Base လုပ်ထားတာဆိုတော့ Joomla! 1.0.xx နဲ့ပက်သက်လို့ကတော့ အားလုံးကိုသိသလောက် Share ပေးနိုင်းပါတယ်။
share မှာဖြင့် share ပါ
ကျွန်တော် Joomla 1.5 သုံးပါတယ်။
fireboard component သုံးပါတယ်။
front end မှာ fireboard ကနေ logout လုပ်ရင် တစ်ခါတည်းမပြီးပါဘူး
နောက်ထပ် you are previously logged in to the private area of the site ဆိုပေါ်လာပြီး
နောက်ထပ် logout ထပ်လုပ်ရပါတယ်။
logout တစ်ခါတည်းလုပ်ရအောင် ဘာလုပ်ရမလဲဟင်
fireboard component ကို Forum အတွက် သုံး တာလား။ ကျွန်တော်လည်း သုံးဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် Joomla 1.5 မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော် ကတော့ အလို ပြသာနာ မရှိဘူး။
ကျွန်တော်ကို megalomanicboy ရဲ့ Work Flow ကို ပြောကြည့်ပါ။ Register User က ပဲ Forum ကို access ကိုလုပ်လို့ ရတာလား? ဘယ်လိုမျိုးလဲ?
FireBoard is compatible with joomla 1.5 in legacy mode. လို့ ပြောထားတယ်နော်။ ဒါကြောင့် ခုသုံးနေတဲ့ version ကရော compatible ဖြစ်ရဲ့ လား?
ဆက်ပြီး Discuss လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ။
Joomla 1.5.x အတွက် site design တွေကို ကိုယ်တိုင်ဆွဲချင်ပါတယ် ... ဘယ်မှာလေ့လာရမှာလဲ .... site ကောင်းလေးများရှိရင် ပြောပေးကြပါ .... php code တွေကို dreamweaver extension နဲ့ထည့်တော့လည်း အလုပ်မလုပ်ဘူး .... joomla 1.0.x ကတော့ရတယ်။
ကျွန်တော် Template တွေ Joomla 1.0.xx အတွက် customize လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။ ဒါကြောင့် Template and Joomla ရဲ့ concept ကိုနဲနဲသိပါတယ်။
၁၊ Template တိုင်း မှာ index.php ရှိုတယ်။ index.php သည် template ရဲ့Main ပါပဲ။ Template တိုင်းရဲ့ Module Position များကိုလည်း index.php ကပဲ control လုပ်တာပါ။ Template တခုမှာ Style များစွာရှိမယ်ဆိုရင်လည်း template ရဲ့ Style များကို Handle လုပ်တယ်။ index.php ကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီလို တွေ့ နိုင်ပါတယ်။
$default_style = "style1"; // style1 | style2 | style3 | ..... | style20
ဒါဟာ Style အခု 20 ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ
$template_width = "868"; // width in px | fluid
$side_width = "175"; // width in px
ဒါကတော့ Module တွေကို ဘယ် Type နဲပြမယ်ဆိုတာပါ
$menu_side = "right"; // left | right
$show_pulldown = "true";
၂၊ Template ရဲ့ design အားလုံးကို css folder အောက် က template_css.css က လုပ် ပါတယ်။ တခြား css တွေလည်းရှိတယ်။ သူကတော့ main ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Template တစ်ခုမှာ Style
ဆိုပြီး တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Style တခုချင်း ကို css တခုက ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
ဥပမာ original က
text-align: left; ဆိုရင်ကိုယ်က
text-align: right; ဆိုပြီး Firebug မှာ ပြင်ကြည့်လိုက်ပါ။ ချက်ချင်းပဲ Browser မှာ change သွားတာမြင်နိုင်ပါတယ်
၃၊ အဲဒီ css တွေကို edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ နည်းကတော့
Firebug ကိုသုံးတယ်ဗျာ။ Firefox Add ons လေးပါပဲ။ တော်တော်တော့အသုံးဝင် တာဗျ။ ဒီမှာ download ယူလိုက်ပါ။ Install လုပ်ပြီး ရင်တော့ Tools>Firebug>Open Firebug ဆိုပြီး On လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Inspect ဆိုတာရှိတယ် firebug ရဲ့ ဘယ်ဘက်အပေါ် လေးမှာ ရှိတယ်ဗျာ။
Inspect ကို Click လိုက်ပါ။ နောက်ပြီး ကိုယ့် ရဲ့ page ကိုပြန် mouse move လိုက်တိုင်း နောက်ကနေ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ css code တွေ မြင်နေရတယ်ဗျ။
အရင်ဆုံး အလို Approach လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်။ Firebug မှာ နောက်တခုကောင်းတာက Firebug ထဲ မှာ css တွေ change ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Page Changes ကိုချက်ချင်း မြင်နိုင်တယ်ဗျာ။ လုပ်ကြည့် ရင်း မကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ Browser ကို Refresh ပြန်လုပ် လိုက်ပါ။ original css ကိုပြန်မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Firebug ရဲ့ သဘောက Temporary Changes တွေ ကို Browser မှာပြပေးနေတဲ့ သဘောပေါ့။
ဒီနည်းလေး ကတော့ ကျွန်တော် Approach လုပ်တဲ့ နည်းပေါ့
ပြီးမှ Customize လုပ်တယ်။ Template ကိုလုပ်ချင်ရင် php ကိုတော့သိရမယ်ဗျ။ ဒါမှလည်း index.php ကို ဝင်ပြီး control လုပ်လို့ ရမှာ။ ကျွန်တော်အကြံပေးချင် တာကတော့ ရှိပြီး သား Template တခုကို Firebug သုံးပြီး approach လုပ်ကြည့်စေချင်တယ်။ ပြီး မှကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အတိုင်း css ကိုပြန်change ပေါ့။
ကျွန်တော် အမြင်နဲ့ လွဲနေရင်ပြန်ပြောပါအုံး။ ကျွန်တော်လည်း ပညာရတာပေါ့။ No Man is Perfect လေဗျာ.....\_:d/
ကို Zack ရေ
အတွေ့အကြုံလေးတွေ ဆက်ရေးပေးပါအုံး ...
ကျွန်တော်က ခုမှစလေ့လာနေတာ ဆိုတော့ ကို Zack ပြောတာတွေက အရမ်းပဲ အကျိုးရှိပါတယ် ...
ကျေးဇူးပဲ ကို Zack ရေ
လုပ်ပါဦး နောက်တလင့်လောက်... စောင့်နေမယ်နော်. ကလိကြမယ်ဟေ့--ကောင်းကောင်း
ကျွန်တော် Joomla အကြောင်းတော့ သိပ်မသိပါဘူး ။ joomla နဲ့ site ထောင်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် အရမ်းစျေးကြီး တဲ့
YOOTheme တွေရဲ့ Download Link ပါ။ အဆင်ပြေကြပါစေ။ :67::67::67:
ဒီကို CLICK ပါ :d
Thank ပါ exiter ကျွန်တော်က Joomla နဲ့ ဆိုင်တာတွေ အားလုံးကိုလိုက်စုနေတဲ့ ကောင်ပါ။
MMOpenLibrary ကြီး လောလောဆယ် အလုပ်မလုပ်သေးလို့ .... ဒီပေါ်က စာအုပ်လေးတွေ ဒေါင်းပြီးသား ရှိရင် ဒီနေရာလေးမှာ ပြန်တင်ပေးလို့ ရမလား ခင်ဗျာ ...
ခင်မင်စွာဖြင့် ( တာယာ )
Joomla မှာ မြန်မာဖောင့်ရအောင် လုပ်နည်းလေး အသေးစိတ် ပြောပြကြပါဦးဗျာ
fireboard ကို forum component အတွက်သုံးတာပါ။
ဟင့်အင်း... guest လည်း access လုပ်နိုင်ပါတယ်။ post တင်ဖို့ကိုသာ login ၀င်ရမှာ
Joomla! 1.5 ကို Legacy mode နဲ့ run နေတာပါ။ခုထိတော့ ဒီ logout ပြသနာ ကလွဲပြီး
(Rank Management လည်းကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူး) တစ်ခြားပြသနာသိပ်မတက်သေးပါဘူး
ရှိတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့် memory stick ဂစ်သွားလို့ အိမ်ကနေ pac ကိုယူလာလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
Google မှာ ရှာကြည့်ပြီး free ရတဲ့ site မှာ ဆွဲကြည့်ပေါ့
မိမိ Choose လုပ်ထားတဲ့ Template ထဲက CSS file မှာ ပြင်ရပါမယ်။
များသောအားဖြင့် template_css.css ထဲ မှာ ရှိတယ်။
font-family တွေကို font-family: Zawgyi-One; ဆိုပြီး လုပ်ရမယ်။
Issue တခုက Zawgyi font ရှိမ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ font မရှိလည်း မြင်ချင်ရင်တော့ EOT(Embedded OpenType Font!) လုပ်မ ရမယ်။
Joomla တခုလုံးကို Font Change ချင်ရင်တော့ JoomFish ဆိုတဲ့ joomla's component ကိုသုံးဘူးတယ်။ Site တခုလုံးကို language selection combo box နဲ့ change လို့ ရတယ်။
www.bestofjoomla.com/ ကတော့ ကျွန်တော့်အကြိုက်ပေါ့။ Free လည်းရှိသလို ဝယ်ဖို့လအများကြီးရွေးလို့ရတယ်။ Company အများကြီးကလည်း အဲမှာ သူတို့ template တွေရောင်းဖို့ လုပ်ထားပါတယ်။
ကိုစေတန်ကြီး ML မှာတင်ထားတဲ့စာအုပ်လေး ပြန်တင်ပေးတာပါ
အဲဒါပြောတာက Installation directory ကို ဖျက်ခိုင်းတာလေ။
www.yoursite.com မှာ ကိုယ်က Joomla ကို တင်ထားရင် . . . ပထမဆုံးအကြိမ် ကိုယ်က www.yoursite.com ဆိုပြီးသွားရင် သူက www.yoursite.com/installation/index.php ဆိုပြီး တိုက်ရိုက် redirect လုပ်ပေးတယ်။ အဲဒါက database တို့ admin password တို့ configure လုပ်ဖို့ကိုလေ။
ကိုယ်က အပြီးသတ် configure လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီ installation directory ကို ဖျက်ပစ်လိုက်လေ။ /htdoc/yoursite.com အဲဒီကို သွားလိုက်။ အဲမှာ installation directory တွေ့လိမ့်မယ်။ ဖျက်ပစ်လို့ ရပြီလေ။
ကျွန်တော်က တော့ installation directory ကို မဖျက်ပစ်ဘူး။ rename လုပ်လိုက်တယ်။ နာမည်တစ်ခု ခု နဲ့။
ဒီမှာ ဖြေထားတာပဲ ... အဲ့ဒီတုန်းကဘာလို့ မတွေ့တာလဲမသိဘူး ... ကျေးဇူးအများကိုတင်ပါတယ် ကို opengun ရေ
ပတ်ေ၀ါ့ကြီးနဲ့ပါလား။ .zip ဖိုင်က
ကိုအိပ်ဇစ်တာကြီးရေ .. ပတ်ေ၀ါ့သိရင်လုပ်ပါဦး။
ကိုရဲမာန် အဲဒီဆိုဒ်မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲတုန်းက ဒေါင်းလုပ်လင့်ဘေးမှာ search in web ဆိုတာနှိပ်ပြီးရှာရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကိုထွက်ပေါက်ကြီး သူ့ဘလောခ်မှာရေးထားတာရှိပါတယ်။ ဒီမှာ သူရေးထားတာကြည့်ကြည့်ပါဦး။
အစ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲတာ ဒီ ဆိုဒ်ကထင်တယ်။
ကျွန်တော့်အထင် ပက်စ်ဝေါ့ဒ်က zamzamalakazam ထင်တယ်ဗျ။ စမ်းကြည့်ပါဦး။
Yangon က CD အခွေဆိုင်တွေမှာ Joomla Theme DVD အခွေတွေဝယ်လို့ရတယ်။ စမ်းသုံးဖို့အတွက်ပေါ့။ တကယ်သုံးချင်ရင်တော့ ဝယ်သုံးတာ အကောင်းဆုံးပဲဗျ။
Free Web Hosting တစ်ခုပါ......
Joomla အပြင် တစ်ခြား CMS တွေ (19) ခုလောက် ကိုယ်ကြိုက်တာ ရွေးပြီး တစ်ခါတည်း Auto Install လုပ်ပေးတယ်... ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်လည်း upload ကို ftp နဲ ့ရော Web နဲ ့ပါ လုပ်လို့ရတယ်... MySQL ကိုလည်း အကောင့် (၅)ခုအထိ ပေးသုံးတယ်....Real Time Stat လည်း ရှိတယ်.. နောက်ထပ် တခြား service တွေလည်း Support လုပ်ပေးထားတယ်....
Free Hosting Package အနေနဲ ့
- 5gb Space, 30gb Bandwidth
- PHP, and MySQL Support
- Automatic Application Installation
- Wordpress, phpBB2, osCommerce
- ZenCart, Joomla, bBlog, Xoops
- Site Stats and much more...
ကြော်ငြာပေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး... ကျွန်တော်လည်း အဲဒီမှာ ဖရီးအကောင့် နဲ့စမ်းသုံးနေတာ မဆိုးဘူး...MZ က စိတ်၀င်စားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ရှိရင် စမ်းသပ်လို ့ရ အောင် သိတာလေး ပြောပြတာပါ....
Site ရဲ ့လိပ်စာ က http://www.aokhost.com ပါ..
PS: အက်ဒမင်ကြီး တို ့ရေ ရှိပြီးသား ပို ့(စ်) ဆိုရင်တော့ ရွှေ့ပြစ်လိုက်ပါဗျာ....
IT သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ခင်မင်လေးစားပါတယ်....:)
5gb ဆိုတာကြီးကို စိတ်၀င်စားတယ်ဗျို့
Joomla မှာ Password မေ့သွာလို့ ဘယ်လိုပြန်ရှာရမလဲ မသိဘူး ...
သိတဲ့သူများ ရှိရင် ပြောပြကြပါအုံး ...
Datebase ထဲက Table မှာ သွားကြည့်တော့ Encrypt လုပ်ထားတယ် ...
ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ....
Frontend ကနေ ကိုယ်သိတဲ့ password နဲ့ new user account တခု create လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Database ကနေ new user account ရဲ့ password ကို Manually copy လုပ်ပြီး admin password ကို override လုပ်လိုက်လိုရပါတယ်။
ကျေးဇူးပဲ ကို Zack ရေ ...
ကျွန်တော် ဘာလို့ အဲ့လို မဉ်းစားမိပါလိမ့် .... :O
ကျွန်တော် social network site တစ်ခုကိုရေးချင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အရည်အချင်းနဲ့ဆိုရင် မဖြစ်နိုင်လို့ social network site တစ်ခုကိုရေးနိုင်တဲ့ Joomla လို cms များရှိမလားလို့ သိချင်လို့ပါ။
ဒါက သီးသန့် အကျယ်ဆွေးနွေးသင့်တယ် ထင်တယ်ဗျ။ အဲတော့ ကျွန်တော် Topic တစ်ခုတင်ပြီးပြောထားပါတယ်။ အဲမှာ ဝင်ပြောပေးပါ။ http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=1348
Joomla အကြောင်းဆွေနွေးထားတာ ၁၀မျက်နှာလုံးဖတ်ပြီးတော့ လေ့လာချင်စိတ် ပေါက်လာပါတယ်။
ကိုစေတန်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်လင့်တွေလဲ သုံးလို.မရတော့ပါ။ တစ်ယောက်တစ်ယောက်ကများ အချိန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် စာအုပ်လေးလုပ်ပေးပါလားဗျာ။ လေ့လာသူတွေ အဆင်ပြေတာပေါ့။
ပြီးတော့ ကိုစေတန်ပြောတဲ့ CSS အကြောင်းစာအုပ်ကော ပြီးပြီလား။ ဘယ်မှာ ဒေါင်းလို.ရမလဲ။
Joomla နဲ့ PHP ကိုလေ့လာချင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး တွေ အတွက် ကျွန်တော်ပညာဒါနပြု ထားတဲ့ http://www.thadarphyu.net/joomzack/
မှာလာပြီး လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Joomla ကိုစပြီး လေ့လာချင်သူ လွယ်အောင်လို့ ဗမာလိုတွေပဲရေးထား ပါတယ်။ Joomla ကိုလေ့လာချင်သူတိုင်းကိုကြိုဆိုပါတယ်။ခု September ကမစပြီးလုပ်ဖြစ်တာပါ အားလုံးကိုလည်းလာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ကျွှန်တော် Joomla 1.5 နဲ့ site တစ်ခုလုပ်နေပါတယ်..
ဟီးဟီး ... ကျွန်တော်တို့တော့ 1.0.15 ကို ပြောင်းထားတယ် ... 1.5.x တွေက ပြဿနာတက်လွန်းလို့
should i change to joomla 1..0.15? then in 1x how can i do for myanmar font? is there any special things to do for Myanmar font?.. i am very new to joomla so please help me.
ကျွန်တော်လည်း အခုမှ joomla ကိုစမ်းသုံးကြည့်နေတာပါ။ အကိုဆိုဒ်ကိုလည်း သွားကြည့်ပြီးသွားပါပြီ။ အချိန်ရရင် ဆက်ရေးပါဦး။ စောင့်ဖတ်နေ့ပါမယ့်။
yeman တောင်းဆိုတဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော် သိထားတာတွေ ဆက်လတ်ပြီး ရေးပေး သွားပါမယ်။ Forum မှာ ဝင်မေးရင်လည်း သိသလောက် ဖြေပေးပါမယ်။ ကျွန်တော် ရဲ့ Site မှာ Joomla အကြောင်း ဆက်ဖတ်ပြီး လိုက်စမ်း ကြည့် ပေါ့။ yeman ရဲ့ Little World ကိုလည်း လည်ပြီးပြီဗျို့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူငယ်တွေ IT တိုးတတ်ဖို့ တတ်နိုင်သလောက်ဝိုင်းဝန်ကြိုးပမ်း ကြတာပေါ့။